Saddex sabab oo dhaliyay fashilka inqilaabkii Farmaajo. | Warbaahinta Ayaamaha
Saddex sabab oo dhaliyay fashilka inqilaabkii Farmaajo.
MUQDISHO-AYAAMAHA-Saacad ka hor aadaanka salaadda subax ee xilliga Muqdisho 27-kii Disembar 2021, waxaa Madaxtooyada Soomaaliya oo aan laga seexan ka socday qorshe shaqo ka joojin iyo eryid Ra’iisal Wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble.
Inkastoo Wareegtada aysan wadan sharciyad oo madaxweyne muddo xileedkiisu dhammaaday iyo mid sharci ahba aanu xil ka joojin karin Ra’iisal wasaaraha, haddana Farmaajo iyo kooxddiisa waxay qorsheeyeen inay adeegsadaan awood ciidan si ay u fuliyaan go’aankaasi halista badan.
Uma suuragelin ciidamadii Farmaajo ee kala qeybsamay inay hor joogsadaan Ra’iisal wasaaraha, waxaana uu si toos ah u tegay xafiiskiisa, halkaasoo muddo kadib uu muuqaal kasoo duubay. Rooble wuxuu ku dhawaaqay inuu fashilmay inqilaabka ee ku kacay Farmaajo, isagoo ugu yeeray Madaxweynihii hore, xafiiskana ka dejiyey sawirkiisa.
Waxaa qoray Goobjooge